Xildhibaan Siraaji “Gor-gortan lagama geli karo in la bixiyo xuquuqdii ay lahaayeen ciidanka, shaqaallaha iyo xildhibaannadii Baarlamaankii 9-aad” – Kalfadhi
Xildhibaan Maxamuud Siraaji oo ah Gudoomiyaha Gudiga Maaliyadda ee Golaha Shacabka ee Baarlamanka, ayaa sheegay in Guddiga Maaliyada uusan awood u laheyn in ay bedelaan qaraar uu Baarlamaanka gaaray.
“Waxaa qasab ah oo aanan gor-gortan laga geli karin in la bixiyo xuquuqdii baaqatay oo ay layaaheen ciidanka, shaqaalaha iyo xildhibaanadii baarlamaankii 9aad. Guddiga maaliyadda wax awood ah uma laha in ay gorgortan ka galaan qaraarkii lagu ansixiyay in xuquuqdaas lagu bixiyo”.
Xildhibaan Maxamuud Siraaji, ayaa sheegay in mas’uuliyada saaran ay tahay in ay la kulmaan wasaaradda Maaliyada oo ay weydiiyaan su’aallo, kaddib warbixinta ay hor kenaan Baarlamaanka si uu go’aan u gaaro.
Arrinta Baarlamaankii 9-aad ee aan mushaarkooda la bixinin culeys weyn ayuu nagu hayaa ayuu hadalkiisa sii raaciyay, Xildhibaan Maxamuud Siraaji.
Ciidanka, shaqaalaha iyo xildhibaanadii baarlamaankii 9aad, ayaa dowlada ku leh mushaaraad, waxaana hadda Baarlamaanka uu doonayaa in la bixiyo xuquuqda ay leeyihiin muwaadiniinta Soomaaliyeed.